Easy Multi Display - Signage Digital sy lozisialy Wall Wall
SISA DIGITAL SIGNAGE
Rindrambaiko Digital Signage ho an'ny orinasa
MORA FARANY MULTI FAMPIANARANA
Ahoana ny asan'ny fampisehoana marika mora
Na orinasa kely ianao na orinasa lehibe, Easy Multi Display dia rindrambaiko famantarana nomerika izay manamora ny fampisehoana ny haino aman-jery amin'ny fisehoana marobe.
Miaraka amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana 1 dia afaka mampiseho loharanom-baovao amin'ny haino aman-jery 24 samihafa ianao indray mandeha, manerana ireo seho 6 samihafa. Miresaha aminay momba ny vahaolana momba ny orinasam-pifandraisana ho an'ny safidy fampisehoana tsy misy fetra.
Ho an'ny Easy Multi Display, tsy manam-paharoa ny mpanjifa tsirairay ary izany no antony anajanonanay hevitra hanomezana tolotra 100% namboarina ho an'ny mpanjifa tsirairay!
Mahazoa fidirana eo noho eo
IZA IZAO NO ATAO VE ity?
Easy Multi Display no rindrambaiko fanaovana sonia nomerika tsara indrindra ho an'ny fikambanana rehetra izay te-haneho fampahalalana nomerika amin'ny mpanjifany sy ny vahininy.
Kitiho eto ambany raha te hahitana bebe kokoa.
Café sy trano fisakafoanana
Dashboards momba ny raharaham-barotra
Fivarotana lamaody sy antsinjarany
Fitsaboana & fahasalamana
Ahoana no hampiasana anao
Fampisehoana mora be?
Mifandraisa aminay hiresaka
Ny ankamaroan'ireo mpifaninana aminay dia mandoa € 30 isaky ny efijery, isam-bolana. Vokatr'izany dia mandoa mihoatra ny € 360 isan-taona fotsiny ianao amin'ny efijery iray! Ny sasany amin'ireo mpifaninana aminay dia mangataka anao hividy rindrambaiko fanampiny amin'ny vidiny 1200 $ avy amin'ny paosy. Miaraka amin'ny Easy Multi Display dia mandoa indray mandeha ihany ianao.
Fitiavana marobe mora
Mampiasà fampisehoana hatramin'ny 6 raha tsy misy vidiny fanampiny.
Tsy misy vidiny mitohy na saram-bolana isam-bolana.
Ampiasao ny solosainao manokana hampandehanana ny rindrambaiko.
Tsy mila Internet.
Mitombo ny vidiny miaraka amin'ny isan'ny fampisehoana.
Handoa vola isam-bolana
Mividianana ekipa faha-3 hihazakazaka ilay logiciel.
Serivisy miorina amin'ny rahona izay ilana Internet.
Amin'ny fisafidianana Easy Multi Display dia afaka mamonjy hatramin'ny 250 $ isam-bolana ianao, izany hoe € 3000 isan-taona amin'ny vahaolana signage digital.
SOROHY FIVORIANA MUDA MULTI
Alefaso ny tranokala, alefaso horonan-tsary ary asio horonan-tsary sy sary ary mozika eo an-toerana.
Mandoa indray mandeha amin'ny fahazoan-dàlana Easy Multi Display anao ary ampiasao mandrakizay izany.
Mora ampiasaina amin'ny rindrambaiko plug sy milalao. Tsy mila fitaovana fety faha-3 sarotra.
Manome fanampiana tsara izahay. Karohy ny anay fahalalana fototra, na angataho izahay ho amin'ny fampiofanana manokana.
Ny rindrambaiko mandeha amin'ny milina misy anao. Tsy mila tambazotra rahona na Internet be pitsiny.
Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana orinasa iaviana dia afaka mampiseho sy manodina programa rindrambaiko hafa mihitsy aza ianao!
IZAY LAZAIN'NY CUSTOMERS ATY
MISY FANDAHORANA MAHAY
Isam-bolana, mpandraharaha mihoatra ny 150 no mampiasa ny rindray hampisehoantsika ny rakitsary, ny sary ary ny votoatin'ny tranonkala hampiroborobo sy hanambarana ny orinasan'izy ireo.
Izay rehetra mila ilainao ...
* Ny sarany isan-taona dia azo ampiharina ihany raha toa ka misoratra anarana aminay izahay tsy voatery fifanarahana fikolokoloana. kitiho eto mba hahitana bebe kokoa.
- Safidy fiteny: anglisy, frantsay, espaniola, sinoa, Deotch efa mandeha ...
Ohatra ho an'ny fivarotam-panafody sy efijery 4
JEREO NY VIDEO ANAY REHETRA
Salama, Guy Condamine no anarako, mpiara-manorina ny EMD, andao hiara-hiresaka.